ညှိုးနွမ်းနေသောပန်းများကိုဖြတ်ပါ - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-03 > သွေ့ခြောက်သောပန်းများကိုဖြတ်ယူပါ
မကြာသေးမီကကျွန်တော့်ဇနီးတွင်ကျန်းမာရေးပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိပြီးလူနာတစ် ဦး အနေဖြင့်ဆေးရုံတွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုဆိုလိုသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးလေးယောက်နှင့်သူတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်အားလုံးသည်သူမအားလှပသောပန်းစည်းများပေးပို့ခဲ့သည်။ လှပသောပန်းစည်းလေးချောင်းဖြင့်သူမ၏အခန်းသည်ပန်းပွင့်ဆိုင်တစ်ခန်းနှင့်တူသည်။ သို့သော်တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်ပန်းများအားလုံးမလွှဲမရှောင်သာသေသွားပြီးပစ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရောင်စုံပန်းများကိုပန်းစည်းပေးရခြင်းအပေါ်ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပန်းများညှိုးနွမ်းသွားရုံမျှသာဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်၏ဇနီးအတွက်ပန်းစည်းတစ်ခုစီစီစဉ်သည်။ ပန်းပွင့်တွေဖြတ်လိုက်ပြီးလှပနေတဲ့အချိန်မှာသေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်။ သူတို့ဟာလှပတင့်တယ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာပွင့်ကြလိမ့်မယ်၊
ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၌လည်းအလားတူပင်။ ကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားချိန် မှစ၍ သေခြင်း၌အဆုံးသတ်မည့်ဘဝလမ်းစဉ်ကိုလျှောက်လှမ်းသည်။ သေခြင်းသည်ဘဝ၏သဘာဝအဆုံးဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အချို့သူများငယ်ငယ်သေဆုံးကြသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ရှည်လျားပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဘဝကိုမျှော်လင့်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ် ၁၀၀ ပြည့်မွေးနေ့တွင်ဘုရင်မထံမှကြေးနန်းတစ်ခုကိုရရှိလျှင်ပင်သေခြင်းတရားရောက်လာပြီကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။
ပန်းတစ်ပွင့်သည်အလှအပနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါမှုကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအထိထုတ်ပေးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဘဝကိုခံစားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၌ပျော်မွေ့နိုင်သည်၊ ကောင်းမွန်သောအိမ်တွင်နေထိုင်။ အမြန်ကားမောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားချင်းများအပေါ်အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်၊ ပန်းများကိုနည်းနည်းမျှအတိုင်းအတာအထိလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့သူတို့၏ဘ ၀ များကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့လူတွေဘယ်မှာလဲ။ သမိုင်းကြောင်းမှယောက်ျားမိန်းမများသည်ဤပန်းပွင့်များကဲ့သို့မှေးမှိန်ခဲ့ကြပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်အိမ်ထောင်စုအမည်များဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သမိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများပျက်ပြားသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သူမှတ်မိမည်နည်း။
သမ္မာကျမ်းစာက ခုတ်ထစ်ထားသောပန်းများအကြောင်း ဥပမာတစ်ခုပြောပြသည်– “လူအပေါင်းတို့သည် မြက်ပင်နှင့်တူ၍၊ ဘုန်းအသရေရှိသမျှသည် မြက်ပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မြက်ပင်တွေ ညှိုးနွမ်းပြီး အပွင့်လည်း ကြွေသွားပြီ” (1. ဓာတ်ဆီ 1,24) လူ့ဘဝအကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အတွေးတစ်ခုပါ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ တွေးကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ယ​နေ့ လှူ​ပေးသမျှ ​ပျော်​ရွှင်​ပြီး ​နောက်​ဆုံးမှာ ဖြတ်​ထားတဲ့ ပန်းတစ်​ပွင့်​လို ​မြေမှုန့်​ထဲ ​ပျောက်​ကွယ်​သွား​တော့မည်​ဆိုတာ သိလိုက်​ရ​တော့မည်​။ အဆင်မပြေဘူး။ သင်ကရော? မင်းလည်း ဒီလိုပဲ ခံစားရနိုင်တယ် လို့ ငါ သံသယရှိတယ်။
ဤမလွဲမသွေအဆုံးသတ်မှ ထွက်လမ်းရှိပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ ငါဖွင့်ထားတဲ့တံခါးကိုယုံတယ်။ ယေရှုက “ငါသည်တံခါးဖြစ်၏။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ငါ့အားဖြင့် ဝင်လာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ဝင်ထွက်၍ ကောင်းသော စားကျက်ကို ရှာလိမ့်မည်။ သူခိုးသည် သိုးများကို ခိုးယူသတ်ဖြတ်၍ ဖျက်ဆီးခြင်းငှါသာ လာ၏။ သူတို့အသက်ကို ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ ငါလာပြီ။” (ယောဟန် 10,9-10) ။
ပေတရုရှင်းပြသည်မှာ၊ အသက်ရှင်ခြင်း၏သင်္ခါရနှင့်မတူဘဲ၊ ထာဝရတည်မြဲသောစကားလုံးများရှိသည်– “သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်မူကား ထာဝရတည်၏။ ဒါ မင်းကို ကြေငြာထားတဲ့ စကားလုံးပဲ” (1. ဓာတ်ဆီ 1,25).
သခင်ယေရှုအားဖြင့် ဟောပြောခဲ့သော သတင်းကောင်းနှင့် ထာဝရတည်မြဲနေမည့် သတင်းကောင်း အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒီသတင်းကောင်းက ဘယ်လိုသတင်းမျိုးလဲဆိုတာ သင်သိချင်နေပါလိမ့်မယ်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အခြားအပိုင်းမှ ဤသတင်းကောင်းကို သင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်– “အမှန်အကန် ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏” (ယောဟန်၊ 6,47).
ဤစကားများကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်များမှပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါကသင်ဟာဒဏ္asာရီတစ်ခုအနေနဲ့စွန့်လွှတ်ချင်တဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှမစဉ်းစားမိတဲ့ဘုရားတစ်ဆူရဲ့မေတ္တာပါသောကတိတော်ဖြစ်တယ်။ သေခြင်းအကြောင်း - ထာဝရအသက်အတွက်သင်မည်သည့်အဖိုးအခကိုပေးမည်နည်း။ သခင်ယေရှုမှာထားသည့်စျေးနှုန်းကအဘယ်နည်း။ ယုံ! သခင်ယေရှု၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်နှင့်ဘုရားသခင်သဘောတူပြီးသင်၏အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်လက်ခံပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးသူအဖြစ်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
Keith Hartrick ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်